Ihuenyo Ngwunye Nchọpụta ihuenyo: Basic Edition - Ọkachamara Ọkachamara
Nchapu ihuenyo bụ ngwá ọrụ dị irè maka ma ndị ọrụ weebụ ma ụlọọrụ ndị chọrọ ibudata otutu ozi di n'igwe, dika ọdịnaya na ihe oyiyi, site na weebụsaịtị di iche iche. Otu n'ime ihe kachasị mma maka nchịkọta ọdịnaya bụ ihuenyo- ngwunye ngwongwo . Kemgbe afọ 2002, ọ na-emekọ ndị ahịa site na ọtụtụ ụlọ ọrụ, dịka ụlọ ahịa e-ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ ahụ ike na ụlọ ọrụ na-adọkpụ na ndị ọzọ. N'ezie, ọ na-arụ ọrụ dịka nchekwa data, nke na-enye ndị ọrụ ya nhọrọ maka data m na-akpaghị aka site na narị otu narị narị na isi ntanetị gafee weebụ.
Wepụ Data sitere na weebụsaịtị
Onye nlekota ihu nwere ike ijikwa ihe ọ bụla saịtị na weebụ. Ndị ọrụ ọkachamara nke nyocha ihuenyo nwere ike inyere ndị na-enyocha weebụ aka inweta ihe ha chọrọ - pachacamac tours lima peru. Ndị ahịa kwesịrị ịkọrọ ha ụfọdụ ozi gbasara ọdịnaya ha chọrọ iwepụta na usoro data ha ga-achọ inweta. A na-esite na nsụgharị na-ekpuchi ihuenyo site na asụsụ mmemme, dị ka Java, PHP na ndị ọzọ.
Ihe mere eji eji ihuenyo-Nchapu
Ọ bụ ngwanrọ a ma ama na ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ nke ụwa tụkwasịrị ya obi iji nweta ozi ha chọrọ n'ụzọ dị mfe, nke dị mfe ma nwee ọganihu n'ime nanị sekọnd ole na ole. Onye na-ekpuchi ihuenyo nwere ike ịmepụta data maka ndị ahịa ya kwa ụbọchị ma nwee ike ijikwa ihe ọ bụla ụdị weebụ ọ bụla n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Karịsịa, ndị ahịa nwere ike ịjụ ajụjụ ha ma nweta ihe ndị dị mkpa n'oge ọ bụla.
Uru nke iji nyocha ihuenyo maka ụlọ ọrụ
Otu n'ime uru kachasị mkpa nke ngwa ncha ihuenyo bụ ọsọ ya. Ọ nwere ike ikpokọta data niile maka ndị ahịa na sekọnd ole na ole. N'ezie, onye na-ekpuchi ihuenyo na-enye nnukwu nhọrọ maka ụlọ ọrụ ọ bụla nke chọrọ iji nweta nsonaazụ ngwa ngwa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ inweta ahịa nke ngwaahịa ụfọdụ na-agbasasị na weebụ, ha nwere ike iji usoro ihe omume a dị ịtụnanya. Ọzọkwa, a pụrụ iji scraper na-enyefe ụfọdụ data site na usoro nke ọzọ gaa na nke ọzọ, ma ọ bụ ya nwekwara ike tie usoro ọnụ. Ihe nlekota ihu na-akwado ọtụtụ usoro maka mbupu ozi data, dịka XML, HTML, CSV, Access na ndị ọzọ. Ọzọkwa, a na-ebupụ data niile na-akpaghị aka na ụdị ụfọdụ nke ndị ahịa na-ahọrọ tupu oge ezuo.
Ọ bụ nnukwu usoro cross-platform nke nwere ike tinye ebe ọ bụla. Ọzọkwa, ọtụtụ ikikere ngwanrọ dị maka ụdị ịzụta ọrụ ọkachamara na Enterprise Edition. Ọ na-enye ọtụtụ narị ndị ọrụ na ụlọ ọrụ nnukwu nsonaazụ. Ọ bụ ngwá ọrụ na-ekpuchi ihuenyo n'efu nke na-arụ ọrụ na ụdị ntanetị ọ bụla, nakwa dị ka akwụkwọ dị ike. Ndị ọrụ nwere ike ibudata usoro ihe omume ngwa ngwa na ngwa ngwa wee malite iji ngwá ọrụ a iji nweta data ha chọrọ.